१५ दिनमा नै अस्पतालहरुले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सक्छन्? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
१५ दिनमा नै अस्पतालहरुले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सक्छन्?
स्वास्थ्यखबर बिहिबार, वैशाख ३०, २०७८, ०६:०५:००
काठमाडौं– कोभिड संक्रमितको संख्या बढेसँगै उपचारमा अक्सिजनको अभाव शुरु भएको छ। अक्सिजनको अभावमा ठूला अस्पतालले बिरामी भर्ना नै नलिने भनेर उद्घोष गर्न थालेका छन्।
केही ठाउँमा त अक्सिजनकै अभावमा कोभिडका बिरामीको मृत्यु भएका खबर समेत आउन थालेका छन्। अक्सिजनको अभाव बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १०० बेड भन्दा बढी क्षमता भएका अस्पताललाई १५ दिन भित्र आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट खोल्न निर्देशन दिएको छ।
के मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट १५ दिनमै स्थापना गर्न सक्छन् त? हामीले सीता अक्सिजन ग्यास प्लान्टका सञ्चालक प्रलाद तिमल्सिनालाई सोधेका थियौं। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज नभएको बताए।
१५ दिनभित्रै प्लान्ट स्थापना गर्न आवश्यक सामान कहाँबाट ल्याउने र कसरी जोड्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। त्यसमा पनि अस्पतालहरुले अहिले चलाइरहेको प्लान्ट तथा नयाँ बन्ने प्लान्टबाट उत्पादन हुने अक्सिजन ग्यासले भेन्टिलेटर नचल्ने र कोभिडका बिरामीलाई पनि प्रेसर नपुग्ने उनको भनाइ छ।
‘अस्पतालले उत्पादन गर्ने अक्सिजन ग्यास प्लान्ट भनेको पीएस प्लान्ट हो,’ उनले भने, ‘यसको क्षमता कम हुन्छ। कम क्षमता भएको प्लान्टले आवश्यक पर्ने प्रेसरअनुसार अक्सिजन सप्लाइ गर्न सक्दैन।’
आफूले पनि केही काम गरेको छु भनेर देखाउन सरकारले १५ दिनभित्रै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन भनेपनि त्यो विकल्प धेरै प्रभावकारी नहुने तिमल्सिनाको भनाइ छ। अहिले कोभिडका बिरामीको उपचारमा अक्सिजनको अभाव हुनुमा सरकारकै कमजोर तयारी जिम्मेवार रहेको पनि उनी बताउँछन्।
‘सरकारी तयारी कमजोर हुँदा अहिले बजारमा अक्सिजन अभाव अभाव भएको हो’, उनले भने, ‘अहिले दैनिक ९ हजार सिलिण्डर उत्पादन भइरहेको छ, तर माग १८ देखि २० हजार सिलिण्डर रहेको छ। सरकारले पहिले नै तयारी गरेर सिलिण्डर भर्न लगाएको भए यो अवस्था आउने थिएन।’
निजी अस्पतालहरुको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अल्का अस्पतालका सञ्चालक कुमार थापा पनि १५ दिन भित्रै अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न नसक्ने बताउँछन्।
थापाका अनुसार अल्का अस्पतालमा अहिले पनि प्लान्ट सञ्चालन भइरहेको छ। तर, प्लान्ट ३० प्रतिशतको क्षमतामा पनि चलेको छैन। प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा नचल्नुको कारण कोभिडका बिरामीलाई अक्सिजनको प्रेसर बढी चाहिने हुँदा त्यो सम्भव नभएको उनको तर्क छ।
‘सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन’, थापाले भने, ‘के सरकारले सरकारी अस्पतालमा १५ दिन भित्रै प्लान्ट स्थापना गर्न सक्छ? पहिले आफू गरेर देखाउनु पर्छ।’
अक्सिजन ग्यास प्लान्ट स्थापना गर्न आवश्यक सबै ९९ प्रतिशत सामान भारतबाट आयात गर्नुपर्ने व्यवसायी तथा निजी अस्पतालका सञ्चालकहरु बताउँछन्। आफैं महामारीको चपेटामा रहेको भारतमा अहिले सबै सामान पाउने अवस्था छैन। पाएको अवस्थामा ल्याउन सकिने अवस्था पनि नभएको थापा बताउँछन्। अल्का अस्पतालले अहिले १०० बेडलाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा ल्याएको प्लान्ट निर्माणमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थापाले जानकारी दिए।
सरकारी निर्णय तत्कालका लागि सम्भव नभएपनि केही दिनपछि वा फेरि आउने नयाँ वेभहरुका लागि भने सहयोग हुने वीर अस्पतालका निमित्त निर्देशक डाक्टर शान्ता सापकोट बताउँछिन्।
अहिले प्लान्ट स्थापना गर्न आवश्यक सामान ल्याउन सरकारी तवरबाट हुने सहयोग र जडानमा आवश्यक जनशक्तिले पनि प्लान्ट स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने समय फरक पर्ने उनी बताउँछिन्। तर, सरकारी निर्णयलाई केही ढिला भएपनि कार्यान्वयन गर्ने हो भने आउने दिनमा यस्तो समस्या भोग्न नपर्ने उनको तर्क छ।
वीर अस्पतालले अहिले आफ्नो प्लान्ट भएपनि वैकल्पिक रुपमा बाहिरबाट पनि सिलिण्डर ल्याएर अक्सिजन प्रयोग गर्न परेको उनको तर्क छ। ‘पहिले माग कम थियो। आफ्नै प्लान्टबाट उत्पादन भएको अक्सिजनले पुगको थियो’, उनले भनिन्, ‘तर, अहिले माग बढेको र क्षमताले धान्न सक्ने अवस्था छैन।’
तर, सरकारले भनेको जस्तै गरी १५ दिनमा नै प्लान्ट स्थापना गर्न सहज भने नभएको सापकोटा बताउँछिन्।
आज भुटानबाट ३ लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोप नेपाल आउँदै उक्त खाेप ३ लाख डोज एस्ट्राजेनेका प्राथमिकताका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइने छ। कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकले ४ महिनादेखि दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन्। ३० मिनेट पहिले
आज भुटानबाट ३ लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोप नेपाल आउँदै ३० मिनेट पहिले